किन यस्तो भने हरि उदासीले पूर्वसचिव पत्नी र कामदारका बारे? घटना सोचे भन्दा शंकास्पद (पुरा अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > किन यस्तो भने हरि उदासीले पूर्वसचिव पत्नी र कामदारका बारे? घटना सोचे भन्दा शंकास्पद (पुरा अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस)
किन यस्तो भने हरि उदासीले पूर्वसचिव पत्नी र कामदारका बारे? घटना सोचे भन्दा शंकास्पद (पुरा अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस)
admin February 14, 2020 भिडियो, समाज	0
फाल्गुण ०२ काठमाडौँ । पुर्व सचिव अर्जुन कार्कीकी श्रीमतीको ह’त्या प्र’करणलाई मिहीन ढंगबाट अनुसन्धान गर्नु पर्ने प्रहरीले बताएको छ । खासगरी सीसीटिभी फुटेजमा देखिए अनुसार पुर्वसचिव कार्कीकी पत्नी मुना अधिकारी कार्कीलाई कु’टपि’ट गरेका र आ’त्मह’त्या गरेको भनिएका कामदार २२ बर्षिय विजय चौधरीको अन्डरवेयरमा भेटिएको र’गत र विर्यका कारण घ’टनालाई गहिरो गरि केलाउनु परेको प्रहरीले बताएको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा मुनाको महिनावारी चलिरहेको तथ्य पनि बाहिर आएको छ । केही दृश्य फूटेजमा नपरेका कारण पनि सोमबार भएको यो घटनाले अर्को मोड लिएको हो ।कु’टपि’ट गर्ने चौधरी पनि मृ’त अवस्थामा भेटिएका कारण उनको अन्डरवेयरमा भेटिएको वि’र्य र ‘रगत कसरी आयो भन्ने यकिन गर्न मुस्किल भएको छ । तर चौधरीले ‘ब’ला’त्कार’को प्रयास गरेको हुन सक्ने स्वभाविक अनुमान गरिएको छ । त्यसको प्रतिकारका क्रममा दुवैजनाबीच कु’टाकु’ट भएको हुनसक्ने अनुमान गरिन्छ । खासगरी केही फूटेजमा दुवैबीच कु’टाकु’ट भएको पनि देख्न सकिन्छ ।
विवरणमा आएअनुसार सोमबार बिहान १० बजेर १० मिनेटमा चौधरीले मुनालाई भान्सामा न्याकेको भेटियो । तर त्यसको १३ मिनेटसम्मको क्रियाकलाप वा घ’टनाक्रम क्यामेरामा कैद हुन सकेन ।१० बजेर २३ मिनेटमा भेटिएको फूटेजमा मुनाको टाउकोमा चौधरीले सात पटक प्र’हार गरेका छन् । ११ बजेर ८ मिनेटसम्म उनी किचेनमा ओहोरदोहोर गरिरहेको देखिएको छ । त्यसबीचको समयमा के भयो ? यो शंकास्पद रहेको छ ।
११ बजेर २० मिनेटमा पूर्वसचिव कार्की घरमा आइपुग्दा चौधरी झु’न्डि’एको अवस्थामा देखिए भने मुना किचेनमा लडिरहेको भेटिएको दृश्य छ । ‘यसलाई शंकाको घेरामा राखेर थप अनुसन्धान जारी छ’, प्रहरी अधिकारी भन्छन् ।प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार चौधरीले मुनामाथि ज’ब’रज’स्ती क’रणीको प्रयास गरेको हुनसक्छ र त्यसको प्रतिकार हुँदा हाथापाई र कु’टा’कु’ट हुनसक्छ । यसका अलावा घ’टना बाहिर आउने त्रासले चौधरीले आ’त्मह’त्या गरेका पनि हुन सक्ने ।
प्रहरीको अनुमानअनुसार महिनावारीका कारण मुनाको शरीर शिथिल थियो। त्यस्तो अवस्थामा विजयले उनको अंगमाथि अनुचित व्यवहार गर्न खोज्दा केही न केही असमझदारी भएको हुनुपर्छ। त्यही असमझदारीको आवेशमा विजयले उनको ह त्या गरे।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको समाचार अनुसार पूर्वसचिव कार्कीको श्रीमती मुना कार्कीको ह त्या गरेर आ त्मह त्या गरेको भनिएका विजय चौधरीले विना तलब ६ वर्षदेखि घरेलु काम गरेको खुलेको छ।आफन्तका अनुसार कक्षा ६ सम्म पढेर छाडेका विजयका बाबुआमाले भविष्यमा जागिर पाउँछ भनेर छोरालाई कार्की निवास पठाएका हुन्।विजयलाई कार्कीको घरमा सरसफाइलगायत काम लगाइएको थियो। तर, कति पैसा पाउने भन्ने निर्धारण गरिएको थिएन।
‘छोराको पढाई थिएन, कार्की सरले राम्रो जागिर लगाइदिने भनेपछि केही समय घरमा काम गर्न पठाएको हुँ,’ विजयका बाबु जानकी चौधरीले भने, ‘छोराले घरमा काम गरेबापत केही पैसा पाइएला भन्ने आशा त थियो, तर ६ वर्षसम्म छोराले एक पैसा पनि पठाएन। तलबबारे कुनै सल्लाह नै नभएकोले हामीले पनि माग्न सकेनौँ।’यस घटनामा विश्लेषकहरुले पनि आ-आफ्नो बिचार राख्दै आएका छन । हरि उदाशीले यस बिषयमा अरु भन्दा छुट्टै बिचार राखेका छन ।
पुरा कुराकानी तल हेर्नुहोसः
भर्खरै ट्रकले स्कुटरलाई ठक्कर दिएपछि स्कुटर चालककाे निधन
के भएका अचेलका युवतीहरू? देह व्यापारकै क्रममा प्रहरीले समातेपछि बयान दिदा प्रहरी नै चकित!
पारस शाहको यो हर्कतपछि उनकै समर्थकले समेथ ‘आजबाट म उनलाई घृणा गर्छु’ भनेपछि…